Yimaphi amadolobha amahle kakhulu eFrance | Izindaba Zokuhamba
IFrance izwe eligcwele izindawo ezithakazelisayo futhi inhle ngendlela eyisimanga, phakathi kwayo kunamadolobha ayo ahambela kakhulu konke angakunikela, kusuka ezikhumbuzweni zomlando kuya ezindaweni ezinobuhle obukhulu. Kungakho sizokwenza uhlu oluncane lwamadolobha amahle kakhulu eFrance, ngoba kungenzeka kube ngolunye lwalezo zinhlu zezifiso zokuba nezindawo zokuvakasha ezinyangeni ezizayo, lapho konke sekubuyele kokujwayelekile.
Sizobona okungamadolobha amahle kakhulu eFrance, yize siqinisekile ukuthi sizophuthelwa iziphakamiso ezithile. EFrance kunamadolobha amaningi athakazelisayo, amanye amancane futhi ayemukeleka kakhulu kanti amanye amadolobha esizochitha kuwo amasonto. Ngakho-ke qaphela zonke izindawo okufanele uvakashele kuzo.
IParis iyinhloko-dolobha yaseFrance nedolobha layo elibaluleke kunawo wonke futhi futhi ingenye yamahle kakhulu, ngakho-ke siyaqiniseka ukuthi ingeyokuqala ohlwini uma ungakayivakasheli okwamanje. Kunezinto eziningi okufanele ukwenze eParis, kusukela ekuboneni i-Eiffel Tower ukuchitha usuku uvakashele eMnyuziyamu yaseLouvre, ubone eminye iminyuziyamu efana ne-Orangerie noma i-d'Orsay, ukhuphukela e-Basilica of the Sacred Heart bese ubona isifunda saseMontmartre, uthathe isikebhe esiya eSeine, ungene eNotre Dame, ukhuphuke intaba I-Arc de Triomphe noma umane uhambahamba emigwaqeni nasezingadini zayo ukujabulela indlela yokuphila yaseFrance. Kumele futhi sihlangane nempilo yakhe emakhefi, ngoba kuyinto ejwayelekile.
Leli dolobha lasendulo elaliyinhloko-dolobha yaseGaul eMbusweni WaseRoma ngenye indawo ongayivakashela eFrance. ILyon inedolobha elidala elimangalisayo e lapho ungathola khona amagugu afana ne-Basilica of Notre Dame de Fourviere ngezitayela ze-Romanesque, Gothic neByzantine. IVieux Lyon iyindawo endala kunazo zonke edolobheni, indawo lapho ungathola khona izindawo zokudlela ezihamba phambili edolobheni. Leli dolobha lasungulwa ngezikhathi zamaRoma yingakho singathola nemidlalo yeshashalazi yasendulo yamaRoma efana neTheatre yasendulo yaseLyon kusuka ngonyaka we-15 BC.
IMarseille ngomunye umuzi omuhle waseFrance ofanele ukuvakashelwa. Kuyo, kunezindawo ezifana ne-Old Port, indawo eseyizihambeli eziningi, lapho ungazama khona izitsha ezihamba phambili edolobheni futhi uhambe ubukele ukuxokozela kwabadobi nezikebhe. Vuliwe IMarseille kumele ibone indawo yaseLe Panier, endala edolobheni lapho kunezakhiwo zesitayela seProvencal, izikwele ezincane nemigwaqo. IMarseille's Major Cathedral ingesinye sezikhumbuzo zayo ezibaluleke kakhulu, nesitayela sokuqala saseByzantine Romanesque. Elinye lamaphuzu alo athakazelisayo yiFort Saint Jean emnyango we-Old Port noma iBoulevard Longchamp enhle.
IBordeaux ingelinye lamadolobha amahle kakhulu eFrance, idolobha elinokuningi ongakubona. I- I-Place de la Bourse ingenye yamaphuzu athakazelisa kakhulu, isikwele esihle esinezakhiwo zaseFrance zekhulu le-XNUMX lapho singabona khona umthombo we-Three Graces nesibuko samanzi esidumile. ISanta Andre Cathedral nePey Berland Tower okunye okumele bakubone. Liyisonto lombhishobhi elenza ingxenye yeFrance Camino de Santiago futhi linalo mbhoshongo wesiteleka. IPont de Pierre yibhuloho elidala elakhiwa nguNapoleon phezu koMfula iGaronne. Kumele futhi sibheke nekhulu le-XNUMX leminyaka iPorte Cailhau, elinye lamasango amadala odongeni lomuzi.
Lona ngumuzi wasendulo obiyelwe ngodonga otholakala impela. Ivakashelwa kalula ngempelasonto kodwa ibhekwa njengenye yezinhle kakhulu eFrance. Ingabe i- ikomkhulu lasendulo elaliphakathi kwamasimu esivini. Ngaphandle kwezindonga, ungavakashela indawo yaseBastide de San Luis kanye neCanal du Midi bese ungena endaweni ebiyelwe ngodonga ukuze ubuyele emuva kuleyo nqaba yasendulo.
IVersailles iphakathi kwezindawo ezivakashelwa kakhulu eFrance ngoba yiyona isakhiwo esikhulu seSigodlo saseVersailles, umsebenzi omangalisayo. Ungavakashela iHholo Lezibuko ngaphakathi esigodlweni, igumbi elikhulu futhi elimangazayo. Ungabona futhi amafulethi asondelene nezindawo ezifana nezingadi ezenziwe ngesandla. IGrand Trianon yisigodlo esincane esingavakashelwa nakulesi sakhiwo.
INantes itholakala eduze nendawo yaseLoire, eyaziwa ngezinqaba zayo futhi idolobha elifanele ukuvakashelwa. Kuyidolobha lakuloJules Verne futhi lokhu sekuholele ekutheni ukudalwa kweMachine Island, okumangazayo nokumangazayo kuwo wonke umuntu. Ngakolunye uhlangothi, edolobheni singabona iCastle of the Dukes of Brittany noma iCathedral yaseSan Pedro neSan Pablo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amadolobha amahle kakhulu eFrance